MINE – Gold Channel Movies
Episode9Jun. 05, 2021
Episode 10 Jun. 06, 2021
Episode 14 Jun. 20, 2021
Episode 15 Jun. 26, 2021
Episode 16 Jun. 27, 2021
ဒီတစ်ခေါက် GC ပရိတ်သတ်ကြီး ကြည့်ရှုခံစားရမယ့် ကိုးရီးယားဒရမ်မာဇာတ်လမ်းကတော့ Mine “마인” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒရမ်မာမှာ အဓိက ရိုက်ကူးဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်က လောကမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမကြား၊ သမီးယောင်းမတွေကြားကပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ အဃာသတွေနဲ့ အမုန်းတရားတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုရှာဖွေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Seo Hee Soo (Lee Bo Young)ဟာ သူဌေးမိသားစု Hyo Won Groupက သားနဲ့ လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက် သူမရဲ့ မင်းသမီးအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဌေးမိသားစုရဲ့ ချွေးမဖြစ်ရတာက သူမအတွက်မလွယ်ကူခဲ့ပေမယ့် အဲ့နေရာနဲ့ကိုက်ညီအောင် သူမဟာ အမြဲတမ်းယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုမူနေထိုင်ရတော့တာပေါ့။
Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyun)ဟာလည်း သူဌေးအိမ်ကသားကြီးနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ သူဌေးချွေးမပေါ့။သူမကတော့ Seo Hee Soo နဲ့မတူဘဲ ကိုယ်တိုင်က သူဌေးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လှပကျော့ရှင်းပြီးထက်မြက်တဲ့အပြင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီး ၂ယောက်ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကို သရုပ်ဆောင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီး၂ယောက်က ဘယ်လိုပုံဖော်ထားဦးမလဲဆိုတာကို အပတ်စဉ် စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်ရှုရဦးမှာပါ။
ကိုးရီးယားဒရမ်မာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအဖို့ လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ကားကောင်းလေးပါပဲ။
Translated by Aye Thinzar Moe,Snowflake,Thae and Yin Cho
KeriSeptember 5, 2021Reply
Here is my web page … asmr why (bit.ly)
CherylSeptember 3, 2021Reply
That is asmr (http://bitly.com/) an extremely
JerrySeptember 1, 2021Reply
MichalSeptember 1, 2021Reply
If you are scoliosis surgery going for finest contents like I do, simply go to
EvieAugust 31, 2021Reply
Here is my web site :: quest bars is – http://j.mp,